Camping Stove Factory - China Camping Stove Vagadziri, Vatengesi
Masitofu edu emisasa akareruka, akavimbika, akachengeteka uye ari nyore kushandisa chitofu chevashanyi chekupisa tende diki kana mota. Ivo vane yakanakisa yekuisa chisimbiso uye kupisa kupisa, yakaedzwa nezviuru zvemisasa. Ive nemazvo kugadzirwa mu304 simbi isina waya inogara yakasimba, inobata kupisa kwakanyanya mushe, uye haizombo ngura kana kukora, ichigadzira zvitofu izvi zvekukamba mushe munzvimbo yekunze yekunze. Senge sekubika munzvimbo diki dzekuvaraidza dzakadai sevasheni matende matende, canvas bhero matende, yurts, sheds, echando hove dzimba, dzimba diki, mabhazi kutendeuka nezvimwe. Iwo akakodzera kupisa uye kubika munzvimbo diki.
Lightweight Camping Stainless Wood chitofu Tende
- 304 Stainless Simbi: Inoshandiswa pakubika, kudziyisa, kudzika musasa, kusamboita ngura kana kukora, inokodzera munzvimbo dzakaomarara dzekunze.
- Yakareruka kutakura: 10 kg chete uye paine nyore kutakura mubato padivi.
-Kuchengetedza nzvimbo: Makumbo anopeteka pasi, uye flue inogona kubviswa uye ichengetwe mukati medumbu rechitofu.
- Kuchenesa kudziya: Kwakanamatidzwa kuti urambe uchidziya pasina utsi hunobuda. Nechemuchina damper, zviri nyore kugadzirisa kupisa uye kupisa nguva.
- Inokodzera kubikwa: Iyo yakatetepa-yepamusoro nzvimbo yakagadzirirwa kupa nzvimbo yaunogona kubika chero chinhu, chakanakira kune vekunze mudiwa.
Kupeta Hot Tende Chitofu YeKambi
- Yakagadzirwa nesimbi isina tsvina: Yakasimba uye inogara yakasimba isina ngura, inokodzera munzvimbo dzakaomarara dzekunze.
- Dhizaini inotakurika: Pangori gumi makirogiramu nehukuru hwayo, huni inopisa huni yakavakirwa kufamba.
- Chitoro chakanakira: Zvikamu zvese zvepombi zvine chimowoni mukati mechitofu chitende chinotakurika muviri, 4-gumbo dhizaini inopeta yakati sandara pasi pechitofu.
- Vatatu vanoona: Zvimiro zvekumisikidza zvinosanganisira 3 girazi rekuona windows mumusuwo uye mativi eiyo ambiance uye moto manejimendi.
- Inokodzera kubikwa: Chitofu chehuni chevasheni chine chivharo cheplate chinopisa chinobviswa kuti uve nemirazvo yakavhurika yekunanzva pasi pehari, kudzora kupisa paunenge uchibika.
Wall Tende Mini Wood Chitofu Nemipendero Yemakumbo
- 304 Stainless Simbi Yakagadzirwa: Ive inoumbwa neiyo 304 simbi isina simbi yekuvaka, iyo isingazombo ngura kana kukora, yakanaka munzvimbo dzakaomarara dzekunze.
- Inotakurika: Inogona kutakurwa pachayo, iwo maraki anogona kushandiswa sekutakura mawoko kana akapetwa.
- Kuchengetedza nzvimbo: 4-gumbo dhizaini inopeta yakati sandara pasi pechitofu; chimney pombi zvikamu zvinowira mukati mechitofu muviri, masherufu emumativi anogona kupetwa pamwechete sechibato chekutakura kuitira nyore kuchengetedza uye kutakura.
- Inokodzera kubikwa: Inozvirova bhaidhi rinopisa rinobviswa kuti uve nemirazvo yakavhurika yekunanzva pasi pehari, kudzora kupisa paunenge uchibika
- Wide kunyorera: Ine 2.4 m yakazara kukwirira neflues kuona kukodzera kwemarudzi ese etende kana sheds.
Inotakurika Simbi isina Simbi Yekambi NeGirazi
- Mukova unoratidzira mweya-wekudzora damper uye girazi hwindo rekudzora moto uye ambiance
- Huru kudivi rekuona hwindo rekuratidzira uye moto manejimendi
- Chikamu cheparutivi masherufu chinokweretesa kubika kuita kwakasiyana siyana uye zvakapetwa sechibato chekutakura
- Yakanyanya kutakurika- Makumbo ekudyara uye masherufu akapeta zvakaperera kumuviri wechitofu; chimneys dzinogona kuisa mukati mechitofu muviri
- Yakakura 4-gumbo dhizaini inobatsira kuti chitofu chigadzikane pane isina kuenzana nzvimbo
Inotakurika 304 Stainless Simbi Tende Chitofu
Solid Fuel Wood Kupisa Chitofu Nehovhoni
- Yakasarudzika dhizaini: Iine rectangular firebox, nesting 4-gumbo uye ovhoni dhizaini, ive yakasarudzika zvechokwadi mupasi, inopa inokatyamadza ambiance painenge ichishanda.
- Yakasimba sevhisi: 304 simbi isina simbi chaiyo yekuvaka iyo yakanyanyisa kupisa ngura, yakanaka munzvimbo dzakaomarara dzekunze.
- Zvakawanda zvekushandisa: Inosanganisira 1 chitofu chemuviri, zvikamu zvitanhatu zve 300 mm kukwirira chimney pombi, 1 spark arrestor, 1 ash scraper.
- iri nyore kutakura: Yakanyanya kutakurika dhizaini. Nesting 4-gumbo rakagadzirirwa zvakapetwa, chimney pombi zvikamu stow mukati mechitofu muviri uye emumasherufu mashelifti anoshanda sekutakura mubato.
- Inokodzera Spaces diki: Inokodzera kupisa uye kubika munzvimbo diki senge tende dzevasheni, dzimba diki uye nezvimwe.
Bindu Kubika Chitofu, Kunze Kwehuni Kunopisa, Camping Stove Mvura Tangi, Tende Wood Inopisa Chitofu, Musasa Wood Burner, Stainless simbi chitofu,